Slitaz: Nkesa pere mpe, mana odi oru | Site na Linux
Slitaz: Nkesa pere mpe, ma odi oru
Ogbe bụ nkesa GNU / Linux na ọ dịkarịa ala m na-ebu ya n'ụzọ mmanye kwere ebe ọ bụla m gara.
Na solo 30Mb Enwere m ihe niile m chọrọ Internet, rụọ ọrụ na faịlị ma rụọ ọrụ kachasị arụ ọrụ kwa ụbọchị. Ọbụna ma ọ bụrụ na arụnyere na kọmputa, ọ bụghị karịa 90Mb nke ohere diski.
Dị ka ị pụrụ ịgụ na Wikipedia:
Site na 16 Mb de RAM nwere njikwa windo JWM (na ụdị nri ọ bụ LXDE). Malite con Ihe nkiri ma nye karịa iwu Linux 200 / Unix, sava weebụ lighttpd, SQLite, ngwaọrụ nnapụta, ndị ahịa IRC, ọzọ SSH na ihe nkesa Dropbear, X Windo Sistemụ, JWM, gFTP, Geany IDE, Mozilla Firefox, AlsaPlayer, GParted, ihe ndekọ ederede faịlụ na ndị ọzọ nchịkọta software.
Ọ bụ ezie na Ogbe ezubere maka ìgwè ndị nwere 128 Mb nke Ram, Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke n'ụba na kọmputa nwere obere ikike nchekwa. Na mbipute nke m nwere ugbu a na PC nke m si ede ederede a, jiri Midori dị ka ihe nchọgharị weebụ, nke m chọtara ngwa ngwa.
Adababeghị m ịwụnye ya n'ihi na njikọ doesntanetị anaghị anabata ya, mana o doro anya na ọ bụ ụzọ ọzọ magburu onwe ya maka kọmputa ahụ ị nwere n'ime ụlọ nchekwa ahụ gbahapụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Slitaz: Nkesa pere mpe, ma odi oru
Nke mere na ha mechara kwuo na nke dị n'Africa dị ọkụ karịa Hasefroch ma ọ bụ na ọ bụrụ na ọ fụọ mkpọrọhịhị ma fụọ hehe
Ọmarịcha distro ... Etu esi etinye ya na kọmputa nwere 64 Mb nke RAM? Enweghị m ike ị nweta ya buut si CD ma ọ nweghị bios na USB buut ...
Zaghachi m0e CAstrOpOrtO
Amaghị m ma ọ ga-enwe ụdị 64-bit na-arụ ọrụ. Ọ ga-enyocha.
Gbalịa inweta mpụga CD ọkpụkpọ, USB ma ọ bụ nweta ọzọ na-arụ ọrụ. Ma ọ bụghị ya ... ọ ga-adị mkpa iji nyochaa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịwụnye ya na Floppy.
onye na -ere ahịa dijo
Aga m anwale ya na laptọọpụ nwere 3 x 128 = 384 megabytes nke RAM
ọ bụ ACER Aspier 1300, na windo XP ọ na-aga dị ka mbe
Aga m agwa gị gbasara nsonaazụ ya, ịnwe karịa obere akụrụngwa chọrọ bụ ihe na-agba ume
5 ezigbo ndụmọdụ ma ọ bụ aghụghọ maka ịrụ ọrụ na vidiyo